Omavet : maimaimpoana ny fiakarana eo amin’ny « ban d’essaie » | NewsMada
Omavet : maimaimpoana ny fiakarana eo amin’ny « ban d’essaie »
Betsaka ireo fiarakaretsaka resy lahatra amin’ny tokony hisian’ny fanovana ho fanatsarana ny asa fitaterana. Efa nitsidika teny amin’ny Omavet ireo taxi resy lahatra ireo ary fantany ny tombontsoa ho azony.
Nilaza ny mpanolotsaina manokan’ny ben’ny Tanàna, nandritra ny fihaonana tamin’ireo vondron’ny taxi maniry ny hivoatra, fa ho maimaimpoana ny fiakaran’ireo taxi eo amin’ny “ban d’essaie” rehefa tonga ao amin’ny Omavet.
Hotanterahina ao anatin’ny roa volana izay tolotra maimaimpoana izay. Hahafantaran’ny mpamily taxi ny lesoka ao amin’ny fiara entiny izany hahafahany manamboatra ny simba sy ny tokony harenina hanatsarana ny tolotra omena ny mpanjifa.
Misokatra 24 amin’ny 24 ora ny toerana manamboatra kodiarana ao amin’ny Omavet. Tsy ifanerena ny fanamboarana fiara ao amin’ity toerana ity saingy misy ny tolotra manokana ho an’ny taxi raha ny fanazavana.
Etsy andaniny, manaiky ny hitondra ny “lanterne” vaovao ireo vondron’ny taxi mivoatra. Mbola hifampidinihana anefa ny endrik’izany “lanterne” izany, mba tsy hanelingelina loatra ny fiara.
Ho hentitra ihany koa ny kaominina amin’ny kolikoly sy ny antsojay mianjady amin’ny mpitondra fiarakaretsaka ataon’ny polisy kaominaly, lasa fanararaotam-pahefana indraindray.
Manoloana ny fandrahonana ataon’ny ekipan’ny FTAR ny vondron’ny taxi mivoatra, manao antso avo amin’ny mpitandro filaminana izy ireo mba handray ny andraikiny satria ao ny manompa, ny sasany mitoraka ary ny hafa, mandrahona ny ho faty mihitsy aza, rehefa mitondra ilay “lanterne” vaovao ireo taxi te hivoatra ireo.